Careers – Prime Victory Company Limited
Temp Cool+ – Cooling Gel Sheet
Hannox – DS-Palmlab
PANDA– PAIN RELIEF PATCH
POWERLYTE – ELECTROLYTE BEVERAGE POWDER
ANGRY BIRD BRACELET & STICKER
ဆေးဝါး နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအား အဓိက ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေသော ကျွန်ုပ်တို့ PRIME VICTORY Co.,Ltd တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အတွက် အောက်ပါ ဝန်ထမ်းများ အလိုရှိပါသည်။
1. Delivery & Collector. (2) ဦး ( ကျား )
(ပစ္စည်းပို့ နှင့် ငွေကောက်)
အန်ိမ့်ဆုံး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အဆင့် ဖြစ်ရမည် ။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (1 )နှစ် နှင့် အထက် ရှိရမည်။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ( ခ ) ရှိရမည်။
လိုအပ်ပါက မော်တော်ကားမောင်းနှင် နိုင်ရမည်။
တိကျသေချာ၍ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်သူ ဖြစ်ရမည်။
ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
2. Cashier (Female 1 post)
တက္ကသိုလ်တခုမှဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။ Computer ကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရပြီး LCCI level I II တတ်မြောက်ရမည်။ Microsoft Office အားလုံးကို အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင်ရမည်။ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ Report များကို အချိန်မှီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ မိမိတာဝန်ကို အပြည့်အဝယူနိုင်ရမည်။
3. Senior Sale & Marketing (M/F2post)
ဤရာထူးအတွက် လျှောက်ထားလိုသူများသည် ဆေး နှင့် စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းတွင် အနည်းဆုံး ၂ နှစ် နှင့် ၃ နှစ်အထက်အတွေ့အကြုံ ရှိသူများ ဖြစ်ရပါမည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ‘ခ’ ရှိသူများကို ဦးစားပေးပါမည်။ ကိုယ်ပိုင် ဆိုင်ကယ်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ PV ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို အမှန်တကယ်လိုက်နာနိုင်ပြီး ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်မှု နှင့် အမှန်တကယ်ကြိုးစားချင်သူများကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ လစာအထူးကောင်းမွန်မည်။မိမိတာဝန်ကို အပြည့်အဝယူနိုင်ရမည်။
4. Data Entry (Female 1 post)
Computer ကောင်းမွန်ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရပြီး LCCI level I II တတ်မြောက်ရမည်။ Microsoft Office အားလုံးကို အမှန်တကယ် ကျွမ်းကျင်ရမည်။ Photoshop စသည့် software များကို နှင့် အင်တာနက်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ Report များကို အချိန်မှီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ မိမိတာဝန်ကို အပြည့်အဝယူနိုင်ရမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါ လိပ်စာသို့ ရုံးချိန်အတွင်း CV Form များ လာရောက်ထုတ်ယူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Prime Victory Co.,Ltd.
No. 130, လမ်း 30, 81*82 လမ်းကြား ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။